China SPORT MEDALS ifektri nabakhiqizi | Kingtai
Izigaba ezingenhla zifaka phakathi ukukhetha kwethu okuhamba phambili kwezindondo ezinemiklamo yezemidlalo nezokungcebeleka. Yebo, sinemidlalo ethandwayo efana ne-baseball, i-basketball, ibhola lebhola likanobhutshuzwayo, kodwa futhi sinezindondo zokuhamba ngebhayisikili, ukubiya, ukupheka neminye imisebenzi. Size sibe nezindondo ezijwayelekile, ezifana nezindondo zethu zethoshi zesitayela sama-Olympic, ezingasetshenziselwa cishe noma yimuphi umcimbi.
Izindondo zezemidlalo zihlanganisa iribhoni yentamo. Kwezinye izimo amaribhoni abomvu, amhlophe futhi aluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa izindondo eziningi nazo ziza nombala weribhoni owukhethayo ukuze uhambisane nemibala yesikole sakho noma yeqembu lezemidlalo.
Izindondo zitholakala ngosayizi abaningi, ziqala ku-1 1/4" ububanzi kufika ku-3". Eziningi zitholakala ngombala noma ngegolide, isiliva noma ithusi.
Amamedali angenawo umbhalo ngokuvamile athunyelwa ngezinsuku zebhizinisi ezingu-1-2 kuphela, futhi aqoshiwe, izinsuku zebhizinisi ezi-4-6. Izindondo zemiklomelo yezemidlalo zifanelekela ukuthunyelwa kwamahhala phansi ngama-oda angaphezu kuka-$100.
Sinenqwaba yezindondo ezihlobene nedizayini yezemidlalo nezokuzijabulisa.
Yebo, sinemidlalo edumile efana ne-baseball, i-basketball, ibhola likanobhutshuzwayo, kanye nezindondo zamabhayisikili, ukubiya, ukupheka neminye imisebenzi.
Inkampani yethu iphinde ikhiqize IZINDLO zenhloso ejwayelekile, njengendondo yethoshi yesitayela sama-Olympic edumile, engasetshenziswa cishe kunoma yimuphi umcimbi.
IZIndondo zezemidlalo zihlanganisa imigexo.
Kwezinye izimo, iribhoni ibomvu, imhlophe, futhi iluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa AMAMEDALI amaningi nawo anombala weribhoni ozikhethele wona ukuze uhambisane nombala wesikole sakho noma weqembu lezemidlalo.
Uma udinga ukwenza ngokwezifiso ilogo, singakuklama futhi, sineqembu labaklami abachwepheshile
Okwedlule: IZIndondo ZEMIJABHO
Olandelayo: Iphinikhodi yokuphrinta isikrini